के तपाई नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ ? देख्नुहुन्छ भने यी रोगको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ::न्युज बिहानी
के तपाई नराम्रो सपना देख्नुहुन्छ ? देख्नुहुन्छ भने यी रोगको शिकार बन्दै हुनुहुन्छ
चिकित्सकको औंला देखाएर कुरा गर्ने विधि – यसअन्तर्गत पीडितलाई चिकित्सकको औंला देखाएर आघातका बारेमा कुुरा गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । यसबाट पीडितको लक्षणमा सुधार सम्भव हुने मानिन्छ । पीटीएसडीको उपचारमा यो सबैभन्दा उपयोगी तरिका हो ।